Konke malunga neeCanary Islands-Yintoni ekufuneka uyenzile kunye nento ongayibona kwi-archipelago | Ukuhamba kwe-Absolut
Iziqithi zeCanary sisiqithi esikuLwandlekazi lweAtlantic kwaye siyila uluntu oluzimeleyo lwaseSpain. Kwelinye icala, olunye lundwendwelo oluphambili kukutyelela iTenerife. Zombini iTeide National Park kunye neSanta Cruz zindawo ezimbini ezibalulekileyo. Ngaphandle kokulibala iiphiramidi zaseGüimar okanye iLa Orotava kunye ne-El Médano, eyenye indawo yabakhenkethi yokuqaqambisa.
KwiGran Canaria ungaya eMaspalomas, eli lelinye lamaziko amakhulu abakhenkethi, kunye neendunduma zawo. Iindawo zokujonga kunye neemyuziyam ziya kuba nomdla kuwe nakwiipaki zendalo. Ukuba siyamisa eLanzarote, siyakonwabela iPaki yeNdalo yeeVolcanoes, kunye neTitanfaya Park. Isiqithi saseLa Graciosa siza kukuvumela ukonwabele iilwandle ezizodwa. Ungalibali iJameos del Agua, eziyinkqubo ebaluleke kakhulu yomqolomba.
E-Fuerteventura unedolophu yaseCorralejo kunye ne-Isla de Lobos okanye ulwandle lwaseCofete, ngelixa useLa Palma ungahamba ngeSanta Cruz, ulwandle iCancajos okanye iSan Antonio Volcano. Kwi-La Gomera ngekhe uphoswe yiVallehermoso, ongowona masipala mkhulu, okanye iTorre del Conde kunye neelwandle zayo.
Ukugqiba e-El Hierro ngekomkhulu layo iValverde kunye neMirador de la Peña okanye umasipala waseLa Frontera, yenye into onokuyonwabela kule ndawo yeeCanary Islands.
Yintoni ongayibona kwiiCanary Islands
por ULuis Martinez yenzayo 2 iminyaka .
Yintoni ongayibona kwiiCanary Islands? Ngumbuzo oqheleke kakhulu phakathi kwezigidi zabakhenkethi abatyelela unyaka nonyaka ...
por USusana godoy yenzayo 2 iminyaka .
Singayichaza iCueva de los Verdes njengokungena kumbindi womhlaba. Kuba imalunga ...
Ipaki yeSizwe yaseTimanfaya
Ipaki yeSizwe yaseTimanfaya, ekwiCanary Island yaseLanzarote, yahlukile kwilizwe lethu ...
Xa sikhankanya iRoque Nublo, kufuneka sikhankanye iGran Canaria kuba yenye yezona ndawo zingqala kwaye ...
Iindawo zokuhlala apho uhlala khona iKrisimesi emangalisayo
por UAlberto Legs yenzayo 3 iminyaka .
Xa kusondela ubusika, ingqele ifika, ama-chestnut ajiweyo kwaye ewe, kunye neKrisimesi. Elona qela lidumileyo ...
Iindawo ezi-6 ezibalulekileyo zokundwendwela eFuerteventura
por Ukuhamba kwe-Absolut yenzayo 3 iminyaka .
Ihlobo liyaphela kwaye ekwindla kuqala, ixesha lonyaka elibonakaliswa kukunciphisa iiyure ...
Isla de Lobos: Yintoni ongayibona kule paradesi encinci kwiiCanary Islands
Endaweni phakathi kweLanzarote neFuerteventura, isiqithi siyaphakama sithembisa indawo entle esize kuyikhangela ...
Uhambo luhlala lunceda ekuphefumleni nasiphi na isiqhelo. Ukuqhawula kunye nokufumanisa indawo ezintsha kubonga ekufumaneni ...
Kufuneka wenze ntoni eTenerife
por UAlberto Legs yenzayo 4 iminyaka .
Iziqithi zeCanary zibonisa ingubo yokukhetha kunye nezinto ezinomdla ezifumana eTenerife eyona ndawo ibalaseleyo apho ...
Ezona dolophu zintle eSpain
ISpain lilizwe elahlukileyo: ukusuka kwiitropiki zeCanary Islands ukuya kwiincopho zekhephu zePicos de Europa, ...
ICaldera de Taburiente
por USusana godoy yenzayo 5 iminyaka .
ICaldera de Taburiente ibekwe kwiiCanary Islands, kwisiqithi saseLa Palma. Yipaki ekhuselekileyo ...